သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက် - Lifestyle Myanmar
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကောင်တွေအတွက် သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးပွင့်ဆိုင်ပတ်သတ်မှုက ဘယ်သူမဆို ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်က မပြည့်စုံတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ နာကျင်စေတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ရစေပါတယ်။ သင်ဟာ two-way အချစ်ရေးရာမှာ ပိတ်မိနေတယ်လို့ ခံစားရရင် သင့်အတွက်ရော အဆင်ပြေနိုင်မယ့် သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဖြေရှင်းနည်းတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါတယ်။
သုံးပွင့်ဆိုင် relationship က အချစ်ရေးမှာ လူနှစ်ဦးထက်ပိုပြီး ပါဝင်သော အချစ်ရေးရှုပ်ထွေးမှု အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ရေးဆိုတာ ချစ်သူရှိပြီးသား လူတစ်ယောက်နဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ တွယ်တာမှုရှိနေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင်ပတ်သတ်မှုက အများအားဖြင့် အမှတ်မထင် တွေ့ဆုံမှုဖြင့် စတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
Triangle relationship ကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းများ
ဘယ်သူမှတော့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်မျိုးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လိုက်မရှာကြပါဘူး။ အတော်လေးခက်ခဲပြီး နာကျင်စေနိုင်တာကြောင့် သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ရေးမျိုးမှာ ဘယ်သူမှမနေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို သုံးပွင့်ဆိုင်ပတ်သတ်မှုမျိုးမှာ သင်ရောက်နေခဲ့ရင် “ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ? ဆက်နေသင့်သလား? ထွက်ခွာသင့်လား? ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲ? “ဆိုတာကို သင်စပြီး တွေးမိလာပါမယ်။
၁။ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆက်ဆံရေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုပါ
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ရေးရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ခြေလှမ်းတွေကိုမှ မလှမ်းခင် မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီး အခြေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သီးသန့်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ပြိုင်ဘက်လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင်ဟာ ချစ်သူရှိပြီးသားလူတစ်ယောက်ကို ပတ်သတ်နေမိတာပါ။
သင်က ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍမှာပဲရှိရှိ၊ ဒါက ဘယ်သူမဆို ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဝေဖန်လို့မရပါဘူး။ အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အရွယ်ရောက်သူအများစုက သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးကြတယ်လို့ “Splitting Up” (p.149)ရဲ့စာရေးဆရာတွေက ပြောပါတယ်။ အပြစ်ရှိတဲ့ခံစားချက်(သို့) အရှက်ကွဲတဲ့ခံစားချက်တွေကို ကျော်လွန်နေထိုင်ခြင်းက အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ကူညီမှာ မဟုတ်သော်လည်း စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကဲ့သို့သော အခက်အခဲတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ သုတသနတွေက ပြသထားပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဆန်းစစ်ပါ၊ သုံးပွင့်ဆိုင် relationship ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ပါမယ်။
၂။ သင့်ဘဝမှာ သုံးပွင့်ဆိုင် ပတ်သတ်မှုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်ပါ
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်မှာနေခြင်း (သို့) အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်လို့ မစဉ်းစားခင်မှာ ကိုယ့်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ relationship တစ်ခုစီမှာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ အဖြေရှာနေရင် ဒီဆက်ဆံရေးမှာ သင်လက်ခံထားတဲ့ ခံယူချက်၊ အာရုံစိုက်မှုက ဘာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါ။ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိရှိရှိလုပ်ပါ။ အဖြေတစ်ခုကို သင်ဘာ့ကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိအမြင်က သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီး နောက်မှ နောင်တရတာမျိုးကို လျော့စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကို စာရင်းပြုစုပါ
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်(သို့) ရိုးရှင်းတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေက မလွယ်ပါဘူး။ သင့်မှာရှိတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေအပြင် အဲဒါတွေရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားပါ၊ သင်ဆက်နေဖို့ ရွေးချယ်ရင် ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်သလဲ? ဒါမှမဟုတ် ထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ? ဆိုတာပါ။
ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုတွေ၊ အမြင်တွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး ရှု့ထောင်ပေါင်းများစွာကနေ စဉ်းစားပါ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုက ကိုယ့်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကို ရှင်းလင်းစေပြီး ပိုကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေမရှိဘူးဆိုတာ လက်ခံပါ
Love triangle psychologyက သင့်ကိုယ်သင် နားလည်ခြင်းနဲ့ ကူညီနိုင်ပေမယ့် အဲ့ဒါက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေ၊ အကြံဉာဏ်ကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ အကြံပြုချက်က စင်ဒရဲလားရဲ့ဖိနပ်တွေလိုပဲ ပိုင်ရှင်နဲ့သာ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ သင်ရှေ့ဆက်လိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖြေရှင်းနည်း၊ အကြံဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။
၅။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ
“သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်မှာ ဘာလုပ်ရမလဲ”ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ရိုးရှင်းတဲ့ တုန့်ပြန်မှု မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် triangle relationship ကိုကိုင်တွယ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အာရုံစိုက်ပြီး သေချာဂရုစိုက်တဲ့အခါ သင်အနိုင်ရဖို့ သေချာပါတယ်။ personal တိုးတတ်မှုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပြန်ရလာဖို့ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်အဆုံးသတ်လိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဆို ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့၊ အကျိုးဆက်တွေကို ကျော်လွှားဖို့ ပိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်၊
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို မကြိုက်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရတာလောက် ကြေကွဲစရာကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က သူ့ကို တကယ်ကြိုက်နေချိန်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကို မသိတာထက် သိလိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သိလိုက်ရတော့ သူတို့မလိုချင်တဲ့ relationship တစ်ခုအတွက် သူတို့နောက်ကို...